सीएनसी राउटर, फाइबर लेजर काट्ने मेशिन, लेजर मेशिन - DADI CNC
फाइबर लेजर काट्ने मेसिन
मेटल शीट फाइबर लेजर काट्ने मेसिन
पाइप ट्यूब काट्ने फाइबर लेजर मेशिन
फाइबर लेजर मार्किंग मेशीन
CNC राउटर मेशीन
CO2 लेजर काट्ने र उत्कीर्णन मेसिन
A अक्ष4अक्ष 60० 90 ०० सीएनसी राउटर मेशीन
सीएनसी राउटर मेशीन १ Al30० एल्युमिनियम टी-स्लट तालिकाको साथ
DADI CNC राउटर मेशिन १25२25 एल्युमिनियम T-sl को साथ ...
मिनी फाइबर लेजर मार्किंग मशीन 20W, 30w, 50W
१25२25 सीएनसी राउटर मेशिन स्टोन मार्बल जेड जी को लागी ...
१25२25 काठ मिलिंग मेशीन पीसीबी वुड एक्रिल मिलिन ...
फाइबर लेजर काट्ने मेशीन DA 3015T
CO2 लेजर एनग्रेभिङ र काट्ने मेसिन १३९०/१६...
वुडवर्किङ सीएनसी राउटर मेसिन २०३०/२०४०/२१३०/२...
हामी हाम्रो ग्राहकहरु र गुणवत्ता पहिले राख्छौं, हामी ग्राहकहरु प्रदान गर्दछौं।
हामी एक पेशेवर निर्माता हो। 10 बर्ष बिक्री र तकनीकी अनुभव छ
हामीले विश्व पार्टनर प्रणालीमा एजेन्टहरू स्थापना गरेका छौं।
शेन्डोंग DADI सीएनसी उपकरण कं, लिमिटेड CNC रूटर र CNC लेजर मेशिनको एक पेशेवर निर्माता हो। उत्पादनहरू व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ: विज्ञापन उद्योग, काठ उद्योग, ढु stone्गा उद्योग, फर्नीचर उद्योग, एल्युमिनियम पर्दा पर्खाल सजावट उद्योग र अन्य उद्योगहरू।
अधिक हेर्नुहोस् >>
एलईडी पत्र काट्ने
लेजर मेशिन नमूना
ढु stone्गा नक्काशी
काठ काट्ने काम
हाम्रो व्यवसाय सीमा कहाँ छ: अहिलेसम्म हामीले संयुक्त राज्य अमेरिका, रसिया, क्यानडा, फिनल्याण्ड, युनाइटेड किन्डम, इटाली, बुल्गारिया, थाइल्याण्ड, पाकिस्तान, भारतीय, मलेसिया, कोरिया, अस्ट्रिलिया, मध्य पूर्व र दक्षिण अमेरिकामा प्रोसी एजेन्ट प्रणाली स्थापना गरेका छौं। , अफ्रिका इत्यादि, हामीसँग साझेदार र ग्राहकहरूको ठूलो संख्या छ।
फाइबर लेजर काट्ने मेसिन, अक्सिजन वा नाइट्रोजनका लागि कुन ग्यास प्रयोग गरिन्छ?
ढु stone्गामा कुँद्ने मेसिनको लागि कस्तो प्रकारको स्पिन्डल मोटर प्रयोग गर्नुपर्दछ, र उत्तम शक्ति के हो?
रिड्सर, व्वाटसपको साथ काठको नक्काशीदार मेसिन मोटर मोटरको आवश्यक विश्लेषण। 0086-159-660-556-83
रिडसरको प्रयोग सीएनसी वुडवर्क ईन्ग्रेभिंग मेशीनको लागि धेरै आवश्यक छ जुन ...
शेन्डोंग DADI सीएनसी मैकेनिकल उपकरण कं, लिमिटेड